1. Salmon waxay u badan tahay inay tahay waxyaabaha ugu diyaarsan ee la isticmaalo. Fillet salmon cusub Waxaa ku jira qaboojiye ku xiran cashada. Ama qado macaan si fudud Iyo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu kariyo suxuunta kala duwan sidoo kale Aynu jaleecno sida loo sameeyo salmon fudud, haweeney guri joogta ah ama cunto kariye bilow ah. Si raaxo leh ayuu u qaban karaa
2. Sida ugu fudud ee loo diyaariyo ka hor inta aan la sameyn
3. Ugu horreyntii, qalabku waa inuu diyaar ahaadaa. Si si caadi ah loogu maamulo fillooyinka salmon-ka caadiga ah Waa inaad u diyaar garowdaa inaad iibsato spatula oo waxyar ka weyn sidii caadiga ahayd. U qaado sida ugu weyn ee aad heli karto. Sida loo doorto, ka fikir intaas Waa inay noqotaa spatula kor u qaadi karta una rogi karta inta badan hilibka digsiga. Iyo kalluunka kalluunka waa la xoqin karaa ama waxaa loo wareejin karaa saxanno si qurux badan loo diyaariyey. Ama haddii ay sidaas ka sii fiican tahay Iibsashada spatula si loo qabsado fillets kalluunka Si gaar ah loogu talagalay ujeedkan, runti waa xulasho aad u wanaagsan.
4. Goor dambe, waxaan raadiyay "digsi bir ah" oo ku habboon kawaan. Ka dib ku rid foornada Tayada Tayada None Stick pan looma arko inay ansax tahay sidoo kale. Raadi mid ka mid ah oo geli kara foornada kulul. Iyo ikhtiyaar kale oo wanaagsan waa digsi shiil leh saxan la xoojiyay. Hubso in birta weelku uusan hagaagsanayn, foorarsan. Markii aad la kulanto kuleylka sare ee foornada Nooca ruxruxa (sawirka) sidoo kale wuxuu ku habboon yahay dubista.
5. Taasi waa mid kale oo lama huraan ah. Cirbado yar yar oo sanka wax ku gashada (Taasi waxay u egtahay tuwweero) ayaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro lafta kalluunka. Xullo cabirka saxda ah, adkeysi kara, tayada waa inay ahaato tan ugu fiican. Sababtoo ah lafaha biinanka salmonku aad ayuu u xoog badan yahay Lafaha la soo bixistuna waa inay ahaadaan kuwo hagaagsan Si aad u hesho qurux qurux badan sidoo kale
6. Waxa ugu dambeeya ayaa ah in la diyaariyo warqad xarkaha ah ama aluminium. Si loogu isticmaalo kaydka kalluunka ee aan ku ridi doonno foornada (kalluunka en papillote) iyo digsiga liner pan pan.
7. Bixinta biinka salmon.
8. Dhig boorka salmon ee sabuuradda. Loox goyn ballaaran Ama waxaad ku ridi kartaa foornada miiska jikada. Qaabeynta ayaa ah Maqaarka wejiga hoos u dhig. (Xitaa maqaarka la'aantiis) una isticmaal gacantaada inaad taabato lafta yar ee soo baxda si aad u aragto meesha ay ku taal. Ka dibna wuxuu ka bilaabmaa dhamaadka ugu adag hilibka Adoo isticmaalaya faashad sanka-sanka ah, si adag u qabso dhamaadka lafta oo soo bixi
9. Karinta salmon dabka kariyaha waa habka ugu fudud. Haddii aadan haysan ama aadan rabin inaad isticmaasho foornada Sida habka karinta, waxaa ka mid ah SAUTEING iyo POACHING.
10. SAUTEING Kalluunka kalluunka lagu kariyo, isku shiil adoo kalluunka u rogaya 1-2 jeer oo keliya adoo adeegsanaya kuleyl aad u sarreeya. Habkani waa mid fudud oo dhakhso leh in la kariyo. Qaabka loo sameeyo waa sidan soo socota
11. Ku dhalaal 1 qaado oo sabdo ah digsi kuleylka dhexdhexaadka ah. Sug subagga inuu burburo oo isu rogo wadarta dahabka mugdiga ah, qiyaastii 3 daqiiqo.
12. Ku daadi milix iyo basbaas digsiga, sug 6 daqiiqo illaa kalluunku noqdo casaan iyo bunni. Kadib kalluunka rog Biddi ugu tagay (Kalluunka gadaal iyo gadaal ha u celin) Sug ilaa inta la kariyey si aad u dhadhamiso, 2 ilaa 4 daqiiqo oo kale.
13. POACHING waa salmon la kariyey oo ku siin doona midab dhammaystiran oo la kariyey oo qurux badan. Sidoo kale waa hab fiican oo kalluunka lagu kariyo iyadoo aan dufan lahayn. Hababka aasaasiga ah waa sida soo socota.
14. Ku dar waxyaalaha kalluunka ku jira digsiga. Kadib biyo ku dar digsiga ku filan si aad ugu daboosho fillet kalluunka Marka xigta, xoogaa milix ah, basbaas iyo caleen caleen sayid ah (kaaraam).
15. Si tartiib ah u kari oo dhakhso, ka dibna dabka dami, dabool digsiga oo kalluunka u kari. Waxay qaadataa ilaa 20-30 daqiiqo. * Xaaladdan oo kale, salmon la xushay waa inuu ahaadaa mid dhexdhexaad ah ama weyn.